AMISOM”Shabellaha Hoose waxaan ku dilnay 22 Shabaab ah” – Gedo Times
AMISOM”Shabellaha Hoose waxaan ku dilnay 22 Shabaab ah”
2nd April 2016 admin Wararka Maanta 3
Hoggaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda argagixisada ee Al-shabab, ayaa lagu dilay howl-gal si wadajir ah ay xalay ciidamada midowga Africa (AMISOM) iyo Ciidamada qaranka Soomaaliyeed (SNA) uga fuliyeen deegaanka Jannaale oo dhinaca Koonfur ka xiga magaalada Muqdisho.
Taliyaha AMISOM ee Sector One Brig. Gen. Sam Okiding ayaa xaqiijiyey in horjoogahaan Al-shabaab ka tirsanaa oo lagu magacaabi jiray Abdirashid Buqdube oo ay la socdeen 22 argagixisada ka tirsanaa la dilay kadib markii duqeyn cirka iyo howlgal dhulka ah laga fuliyey goobaha ay argagixisada ku dhuumaaleystaan ee ku teedsan wadada isku xirta Buufow iyo Jannaale.
Tiro kale oo ka tirsanaa argagixisada, ayaa la qaarajiyey labadii maalmood ee u dambeysay kadib markii ay isku dayeen in ay hor-istaagaan oo ay arbushaan ciidamada AMISOM iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed ee howlaha horumarinta ah sida dayactirka ceelasha iyo nadiifinta waddooyinka ka wada deegaanadaas.
“AMISOM iyo Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed waxa ay sii wadi doonaan nadiifinta wadooyinkaan, ayadoo ilaa iyo hadda la dhameystiray laba wado oo muhiim ah: Mid ka mid waxa ay isku xirtaa Beledul-amiin iyo Qoryooley, halka tan labaad ay isku xirto Beledul-amiin iyo Shalanbood. Waxaan hadda nadiifineynaa tan isku xirto Buufow iyo Jannaale halkaas oo ay Al-shabaab iska caabin kala hor-yimaadeen ciidamada” ayuu yiri Brig. General Okiding.
Ciidamada isbaheysanaya (AMISOM iyo SNA) waxa ay wadi doonaan in Alshabaab laga sifeeyo deegaanada ay haystaan ee ku xeeran Jannaale, si dadka deegaanadaas looga xoreeyo cadaadiska Alshabaab.
“Al-shabab isma qarin karaan, waana wadi doonaa in aan u diidno in ay helaan goobo ay ku badbaadaan si dadka looga xoreeyo argagixisada Alshabab,” ayuu sii raaciyey.
TOP News: Mareykanka oo Sheegay Magaca Sarkaal Shabaab ah oo ay duqeyn cirka ah ku dileen.
Dhageyso: Ciidamada AMISOM oo Madaafiic ku garaacay Tuulooyin hoostaga Janaale